Wararka Maanta Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Yurub Pogba, Isco, Zidane, Khedira, Rondon, Depay, Dybala
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Maanta Suuqa kala iibsiga iyo Wargeysyada Yurub Pogba, Isco, Zidane, Khedira, Rondon, Depay, Dybala
December 14, 2020 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Jarmalka Sami Khedira, oo 33 jir ah, oo doonaya inuu dhaqaaqo bisha Janaayo, ayaa xaqiijiyay inuu xiriir la sameeyay tababaraha Everton Carlo Ancelotti. (Bild – Germanl)
Tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane ayaa sheegay in khadka dhexe Isbaanishka Isco uu kasoo muuqdo qorshayaashiisa. Si kastaba ha noqotee, fursadaha kooban ee 28 jirkaan ee kooxda ayaa keeneysa inuu ka tago Janaayo. (Marca )
Halyeeyga Arsenal Thierry Henry ayaa mar “telefishanka damiyey” markii uu arkay qadka dhexe ee reer Switzerland Granit Xhaka, oo 28 jir ah oo kabtan u ah kooxda Gunners, sida uu sheegayo Patrice Evra, oo ah saaxiibkiisii ​​hore ee France ee tababaraha Montreal Impact. (Sky Sports,via Evening Standard)
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta iyo daafaca dambeedka dhexe ee reer Brazil David Luiz, 33, ayaan wada hadleenin madaama xiriirkooda uu xumaaday, inkastoo labada ninba ay beeniyeen inay jirto dhibaato udhaxeysa. (Football.London)
Paris St-Germain ayaa u dhaqaaqi karta saxiixa weeraryahanka reer Lyon ee reer Holland Memphis Depay xagaaga laakiin Barcelona ayaa waqti dheer taageere u ah 26 jirkaan. (Le Parisien)
Maamulaha Barcelona Ronald Koeman ayaa ku eedeeyay 21-jirka qadka dhexe Riqui Puig, oo lala xiriirinayo Leeds United inuu siidaayay macluumaad markii uu ka hor yimid laacibka reer Spain ee 21 jirada hortooda. (El Pais)
Tottenham ayaa diyaar u ah inay 63.6m siiso Juventus si ay ula soo wareegto 27 jirka weerarka ka ciyaara ee reer Argentina Paulo Dybala. (TodoFichajes)
22 jirka Lyon ee khadka dhexe reer France Houssem Aouar, oo muddo dheer bartilmaameed u ahaa Arsenal , ayaa sidoo kale xiiso ka helaya Paris St-Germain, iyadoo kooxaha ay ku dhow yihiin inay mar labaad wada hadlaan. (RMC )
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Roma Amadou Diawara, oo 23 jir ah, ayaa lagu heli karaa 15 milyan ginni bisha soo socota, iyadoo Leicester iyo West Ham ay ku biirayaan Arsenal iyagoo xiiseynaya ciyaaryahanka reer Guinea. (LaRoma42, via Sun)